Indrindra Torkia Fun Science Festival dia nanana olona ny 150 arivo - RayHaber
[15 / 10 / 2019] Ny indostrian'ny Rail Rail 14-16 dia hatao any Eskisehir amin'ny aprily 2020	26 Eskisehir
[15 / 10 / 2019] Telo Track Fampiharana hisoratra anarana ao Torkia taorian'ny Etazonia	34 Istanbul
[15 / 10 / 2019] Miova ny fihinanam-bokatra Ankara TCDD	Ankara 06
[15 / 10 / 2019] Gebze Darıca Subway dia nafindra tany amin'ny Minisitera fa i Ama	41 Kocaeli
[15 / 10 / 2019] Inona ny zava-misy farany eo amin'ny Tetikasa Tratra Sakarya? ..	54 Sakarya
[15 / 10 / 2019] Fitateram-bahoaka any Samsun	55 Samsun
[15 / 10 / 2019] Ireo escalator tsy miasa any amin'ny Metro Metro Ankara	Ankara 06
[15 / 10 / 2019] Ny BALOSB dia hampivoatra tsy ny Balıkesir ihany fa ny faritra	10 Balikesir
[15 / 10 / 2019] Nifindra tany amin'ny toerana vaovao ny biraon'ny fitsangatsanganana gebze Travel	41 Kocaeli
[15 / 10 / 2019] Manomboka amin'ny IMM mankany amin'ny fitaterana mankany amin'ny fanabeazana Fandaharan'ny horohoron-tany 5	34 Istanbul
HomeTORKIACentral Anatolia42 KonyaIndrindra Torkia Fun Science Festival 150 arivo Mitsidika
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Highway, Headline, TORKIA 0
mampiala voly indrindra siansa fety dia nitsidika ny an'arivony turkiyenin
7 nokarakaraina tao amin'ny Konya Science Center izay misy ny lohahevitry ny hoe "Ahoana ny, Ahoana ny fomba fiasa yıl. Konya Science Festival dia notsidihin'ny olona dimampolo sy zato.
Konya Metropolitan Monisipaly nirahin'i TUBITAK voalohany nanohana Torkia siansa foibe, natao tany Konya, Torkia Science indrindra Center voly, Anatolia siansa lehibe indrindra 7 fety. Konya Science Festival dia nampiantrano mpankafy siantifika amin'ny sokajin-taona rehetra avy any Konya sy tanàna samihafa.
Fety andro naharitra 3, ny andro farany nataon'ny Ben'ny tanànan'i Konya Metropolitan, Ugur Ibrahim Altay, dia niara-nivory ireo ankizy sy tanora.
FANORENANA NY HOAVY TSY TORKIA ny lalana mankany amin'ny ANKIZY Us izahay tsy sahy FANIRIAN'NY
Nilaza ny filoha Altay fa niditra tao amin'ny Festival Science izy ireo mba handany tsena sambatra miaraka amin'ireo zanany ao anatin'ny tontolo iainana milay ary mampiditra fanavaozana maro amin'ity hetsika amin'ity taona ity. An-toerana 'Fanafihana' angidimby ny Armed Unmanned Aerial Vehicle (SIH) mpitari-draharaha fa ny fety nampiseho Altai, "Raha ny marina, ny ankizy rehetra ny hoavy, isika, manantena ny hanome herim-po hanao ny lalana mankany Torkia. Eto amin'ny trano fandraisantsika 100, mpiasan'ny 500 izahay dia manao hetsika ho an'ny ankizy. Ny festival Science dia tombontsoa lehibe tsy ho an'ny Konya ihany, fa ho an'ny Aksaray, Karaman, Nigde, Ankara ary Eskisehir. Antenaina fa amin'ny taona ho avy isika dia handroso sy hikarakara bebe kokoa. Ny endrika lehibe indrindra amin'ny Fetin'ny Siansa antsika dia ny fikarakarana hetsika izay misy ny ankizy. Manantena aho fa ho sambatra ny olon-drehetra avy amin'ny sokajin-taona rehetra hahita anao ho lavitra aty ».
NY FIKAMBANANA NY FIKAROHANA NY RATSY TANY
Ny filoha Altay dia nanondro fa nitombo isan-taona ny tahan'ny fandraisana anjara amin'ny Festival Konya Science dia nilaza hoe: "Tamin'ny taona lasa, mihoatra ny arivo ny 100. Tamin'ity taona ity dia nahatratra isa an'arivony 150 an'arivony isika. TEKNOFEST, izay natao tany Istanbul dia nanampy betsaka ihany koa. Niteraka fahalianana lehibe tamin'ny fety toy izany any amin'ny firenentsika. Antenaiko fa ho tanteraka izany amin'ny fandraisana anjara avo kokoa amin'ny taona ho avy. Te-hisaotra ireo Koniana sy mpandray anjara rehetra aho. ”
'ATAK' ARY 'SİHA' MAMPIASA AN'ILAY FIAINANA AN'ANDRIAMANITRA HO AN'OLAKA
7. Konya Science Festival no dingana voalohany tamin'ity taona ity. Ny helikoptera famokarana eto an-toerana 'Atak' sy ny Fiaramanidina an'habakabaka an'habakabaka (SİHA) ihany koa dia naseho voalohany tamin'ity taona ity tamin'ny Fetin'ny Siansa. Ny helikoptera fanafihana sy SİHA dia anisan'ireo faritra notsidihin'ny mpitsikilo siansa mitsidika ny festival Science.
ASA ATAO ATAO TSARA 100
Ao amin'ny Konya Science Festival izay atao amin'ny faritra misokatra eo amin'ny 1000 metatra toradroa; Mihoatra ny 6, maro ny hetsika toy ny hetsika siantifika, fampisehoana siantifika, fifaninanana, simulators, fiaramanidina, faritra fanaovan-trano fanaovan-gazety UAV sy 100B, atrikasa famokarana valan-javaboary, fandinihana astronomy, atrikasa fanodinana, atrikasa famoronana elektronika. Ireo mpandray anjara dia nanana traikefa tamin'ny fandraisana anjara mavitrika tamin'ny fizotran'ny fikarohana siantifika.
Ny Ivontoerana momba ny Siansa Konya dia nampiantrano ny 1 Million 225 mpankafy ny siansa 06 / 01 / 2019 Konya Konya Metropolitan Monisipaly, Torkia ny TUBITAK-nanampy harena Science voalohany Center, koa 2018 no ifantohan'ny siansa mpankafy. Ny Ivontoerana momba ny Siansa Konya, izay nampiantrano mpitsidika 2018 arivo tamin'ny hetsika maro tao amin'ny 310, dia nampiantrano mpilalao siantifika 1 milanja 225 arivo hatramin'ny nanombohany. Tiorkia foibe siansa voalohany tamin'ny ambony izany fitsipika izany ny Konya Science Center, 2018 eto amin'izao tontolo izao, ary mbola an-jatony ny mpitsidika an'arivony avy amin'ny tanàna any Torkia, sy ny fisehoan-javatra ara-tsiansa lehibe hafa nampiantrano ny Google. Konya Metropolitan no ben'ny tanàna Monisipaly Uğur Ibrahim Altay, Torkia ny TUBITAK nanohana, dia ny siansa voalohany foibe in Center Planetarium Konya Science, ...
7. Konya Science Festival manokatra ny varavarany ho fanentanana ara-tsiansa 05 / 10 / 2019 xnumx'inci Siansa Festival in Konya, Torkia ny foibe siansa voalohany nanomboka tamin'ny TUBITAK-nanampy Konya Science Center. KONYA, MPANJAKA NY FINOANA ANY PASTANA ARY ANDRIAMANITRA Konya Metropolitan Ben'ny tanàna Uğur İbrahim Altay, niresaka tamin'ny fanokafana ny fetibe tamin'ny fandraisana anjara mavitrika, 7 of Konya. taonjato, ny siansa momba ny kolontsaina, ny zavakanto ary ny kolontsaina niaraka tamin'ny olona nampahatsiahy fa ny ivon'ny siansa. Ny filoha Altay dia nilaza fa i Konya no mbola ivon'ny siansa miaraka amin'ny indostria, oniversite ary ny fambolena. “Ity no ivon-tserasera voalohany tohanan'ny TUBITAK. 12 Manana 100 arivo metatra toradroa anatiny isika ao amin'ny faritra arivo metatra toradroa. Izahay dia mandamina hetsika isan-karazany ao amin'ny efitrano fampirantiana lehibe 26. Raha ny marina, tamin'ny Fetin'ny Siansa…
Olom-pirenena 60 no nitsidika ny Centre Ski Centre Erciyes 14 / 01 / 2015 Toeram-pisakafoanana Erciyes Ski 60 no nitsidika: Ny tanànan'i Kayseri Metropolitan miaraka amin'ny fampiasam-bola amin'ny ivontoerana fizahantany fizahan-tany manerantany, Erciyes, dia nandao ny mpitsidika tamin'ny faran'ny herinandro. Ny statistika tamin'ireo izay nandany ny asabotsy sy ny alahady tany Erciyes dia nesorina. Olona an'arivony 60 no tonga tao amin'ny toeram-pandeha. Ny famatsiam-bola nataon'ny Metropolitan ny ivon'ny fizahan-tany Erciyes Winter dia nanomboka nitondra vokatra. Olona an'aliny avy ao Kayseri sy Kayseri no nandany ny faran'ny herinandro tany Erciyes. Araka ny angon-drakitra Erciyes Inc., olona an'arivony 17 dia nankafy ny fahafinaretana amin'ny skiing amin'ny pistes amin'ny ski amin'ny fahasamihafan'ny fahasarotana amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana mekanika amin'ny faran'ny herinandro. Skiing and tobogganing ın
Olona an'arivony 208 no nitsidika an'i Tahtalı Mountain niaraka tamin'ny Olympos Cable Car 16 / 10 / 2014 Olona an'arivony 208 no nitsidika an'i Olympos Teleferik sy Tahtalı: Ny tselatra 2365 metatra ao Tahtalı ao amin'ny distrikan'i Kemer any Antalya dia tondraka ny mpitsidika. Tamin'ny volana voalohany tamin'ny 9 tamin'ny taona dia olona 208 arivo no nitsidika an'i Olympos Cable Car sy Tahtalı Mountain. Ny fiara Cable Olympos, izay napetraka tao amin'ny 2007 ao Mountain Tahtalı, dia manana fahafahana hiala avy any an-dranomasina mankany an-danitra ary ireo mpizaha tany sy vahiny dia mitsambikina mankany amin'ny faritra. Lehiben'ny tale jeneralin'ny Olympos Teleferik General Haydar Gümrükçü, tamin'ny 9 tamin'ny volana voalohany tamin'ity taona ity, olona 208 no nitsidika ny faritra, hoy izy. Haydar Gümrükçü nilaza fa mikasa ny hahatratra olona 230 amin'ny faran'ity taona ity izy ireo.
Tetikasa goavana no nanasitrana ny tsy fananana asa, 150 dia mihinana olona an'arivony 30 / 12 / 2014 Tetikasa goavana no nanasitrana ny tsy fananana asa, 150 dia mihinana olona an'arivony: 40 an'arivony dia miasa ao anatin'ny tetikasa zato tapitrisa, anisan'izany ny seranam-piaramanidina fahatelo sy ny Yavuz Sultan Selim Bridge. Ireo tetikasa an'arivony manintona ny saina amin'ny tetibidiny goavana sy ny isan'ny mpiasa dia lasa vavon'ny fanantenana ho an'ny olona an'arivony, avy amin'ny mpiasa an-tsitrapo, ny architects ary ny injeniera. Just 3. Olona an'arivony 30 no mandany fotoana amin'ny fananganana seranam-piaramanidina. Ny mponina isam-bolana dia 40 arivo. Iray amin'ireo tetikasa goavana, 150, dia mihinana olona an'arivony rehefa voaisa amin'ny fianakaviany. Avy amin'i İzmir ka hatramin'ny Kars X 6 arivo ao amin'ny ekipa izay nanaisika ny Yavuz Sultan Selim Bridge, ny rojo fahatelo amin'ny ala Bosphorus
Fampiharana momba ny fizahan-tany IMBB hanatsarana ny fizahan-tany
Miova ny fihinanam-bokatra Ankara TCDD
Manomboka amin'ny IMM mankany amin'ny fitaterana mankany amin'ny fanabeazana Fandaharan'ny horohoron-tany 5
Klassis 30. Nankalazaina tamin'ny taonany
Fahadisoan'ny Metro, Metrobus Lozam-pifamoivoizana Imamoglu Manohitra ny Sabotage manapoizina
Navoaka ny lalamby tany Jakarta Surabaya
Fanatsarana ny fihotsahan'ny tany eo anelanelan'ny sehatra Durak-Bucak
Drafitra fananganana karazana tontonana ho an'ny tsangambato
Ny Ivontoerana momba ny Siansa Konya dia nampiantrano ny 1 Million 225 mpankafy ny siansa
Olona an'arivony 208 no nitsidika an'i Tahtalı Mountain niaraka tamin'ny Olympos Cable Car
Tetikasa goavana no nanasitrana ny tsy fananana asa, 150 dia mihinana olona an'arivony
3. Olona arivo tapitrisa 150 no hifindra monina any amin'ny seranam-piaramanidina
Tiorkia Marmaray 150 Dream fanao isan-taona no voalohany Ray Tile
400 Nitsidika ny seminera Erciyes Ski Centre
News Archive Safidio ny volana Oktobra 2019 (266) September 2019 (555) August 2019 (508) Jolay 2019 (634) June 2019 (504) May 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) Febroary 2019 (483) Janoary 2019 (502) Range 2018 (620) Novambra 2018 (504) Oktobra 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) Jolay 2018 (506) June 2018 (581) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) Febroary 2018 (500) Janoary 2018 (557) Range 2017 (509) Novambra 2017 (427) Oktobra 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) Jolay 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) Febroary 2017 (477) Janoary 2017 (538) Range 2016 (487) Novambra 2016 (631) Oktobra 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) Jolay 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) Febroary 2016 (855) Janoary 2016 (751) Range 2015 (799) Novambra 2015 (640) Oktobra 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) Jolay 2015 (505) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) Febroary 2015 (878) Janoary 2015 (1077) Range 2014 (963) Novambra 2014 (826) Oktobra 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) Jolay 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) Febroary 2014 (720) Janoary 2014 (733) Range 2013 (664) Novambra 2013 (656) Oktobra 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) Jolay 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) Febroary 2013 (811) Janoary 2013 (906) Range 2012 (911) Novambra 2012 (1168) Oktobra 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) Jolay 2012 (863) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) Febroary 2012 (546) Janoary 2012 (417) Range 2011 (149) Novambra 2011 (35) Oktobra 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) Jolay 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) Febroary 2011 (24) Janoary 2011 (13) Range 2010 (335) Novambra 2010 (12) Oktobra 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) Jolay 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) Febroary 2010 (303) Janoary 2010 (1838) Range 2009 (4) Novambra 2009 (1) Oktobra 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) Febroary 2009 (4) Janoary 2009 (3) Novambra 2008 (1) Oktobra 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) Jolay 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) Febroary 2008 (5) Janoary 2008 (2) Range 2007 (2) Oktobra 2007 (2) Jolay 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) Febroary 2007 (2) Janoary 2007 (1) Range 2006 (1) Oktobra 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) Novambra 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) Febroary 2005 (1) Janoary 2005 (1) Range 2004 (1) Oktobra 2004 (3) Jolay 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktobra 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) Febroary 2003 (1) Janoary 2003 (1) Range 2002 (1) Oktobra 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) Janoary 2002 (2) Jolay 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) Oktobra 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) Oktobra 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)
Kodiarana 'Pirelli P Zero' ho an'ny BMW M8 vaovao
Vahaolana manintona amin'ny fandotoana rivotra
Ny vaovao 1 BMW Series dia nataony ho amidy any Torkia